महराविरुद्ध रोशनी शाहीले किन खोलिन् फा’यर ? – eSidhakura
मुख्य पृष्ठसमाचारमहराविरुद्ध रोशनी शाहीले किन खोलिन् फा’यर ?
महराविरुद्ध रोशनी शाहीले किन खोलिन् फा’यर ?
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महरावि’रुद्ध रोशनी शाहीले एकपछि अर्को फा’यर खोलेकी छिन् । उनले महरालाई ध’म्की समेत दिने गरी दुई दिनयता सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरिरहेकी छिन् ।
महराविरुद्ध यौ,’न दु’व्र्यवहारको रिट दायर गरी पछि आफै फिर्ता गर्न पुगेकी शाहीले अदालतमा समेत नि’र्दोष रहेको बयान दिएकी थिइन् । तर, माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी चयनको ठिक पूर्व उनले महरावि’रुद्ध लेख्न थालेकी छिन् । जसमा महरालाई उ’न्मुक्ति दिन गरेको सम्झौताको विषय समेत छ ।
रोशनी शाहीले मङ्गलबार फेसबुकमा लेख्दै महरालाई जे’लबाट छुटाउन बाचा कसम उनका छोरा राहुल महराले गरेको लेखेकी छिन् । आफूसँग बाचा कसमका रेकर्ड सुरक्षित रहेको समेत लेखेकी छिन् । फेसबुकमा उनको चर्को आ’लोचना हुनेगरी प्रतिक्रिया आउन थालेपछि आफू सत्य लेख्ने जसले जे कमेन्ट गरेपनि मतलब नगर्ने उल्लेख गरेकी छिन् ।
सामाजिक सञ्जालमा उनले रिया क्षेत्रीवि’रुद्ध पनि लेखेकी छिन् । रियाको फोटोसमेत राखेर महराको जो’ई बन्न खोजेको टिप्पणी गरेकी छिन् । रिया क्षेत्री प्रेस सेन्टरकी हुन् । उनीवि’रुद्ध रोशनीले फेसबुकमा फोटोसहित ग’म्भीर विषय लेखेकी छिन् ।रिपोर्टस नेपाल